किन आवश्यक छ कारमा एयरब्याग ? यसले कसरी काम गर्छ ? | Automotive News Nepal
किन आवश्यक छ कारमा एयरब्याग ? यसले कसरी काम गर्छ ? ९ कार्तिक, २०७६
एयरब्याग हरेक कारको लागि स्ट्यान्डर्ड फिचर भएको छ । कुनै पनि कारमा ड्राइभर साइडमा एयरब्याग निकै आवश्यक छ । कार दुर्घटना भएको बेल एयरब्यागले ड्राइभरलाई चोट लाग्नबाट बचाउन मद्दत गरेको हुन्छ ।
हाल कारमा आउने एयरब्यागलाई एसआरएस एयरब्याग नाम दिएको छ । यसको अर्थ सप्लिमेन्टल रिस्ट्रेन्ट सिस्टम हो । कार स्टार्ट गर्ने वित्तिकै कारको मिटरमा एसआरएस इन्डिकेटर केही सेकेन्डको लागि बल्छ । यदि एसआरएस इन्डिकेटर केही सेकेन्ड पछि पनि अफ भएन भने एयरब्यागमा केही समस्या छ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।
गाडीको बम्परमा इम्प्याक्ट सेन्सर जडान गरिएको हुन्छ । यदि कारले कुनै पनि चिजसँग ठक्कर दियो भने इम्प्याक्ट सेन्सरको मद्दतले एक हल्का करेन्ट एयरब्याग सिस्टममा जान्छ र एयरब्यागको भित्र सोडियम एजाइडलाई ग्याँसको रुपमा परिवर्तन गरिदिन्छ । एयरब्याग कटनबाट बनेको हुन्छ र यसमा सिलिकनको कोटिङ लगाएको हुन्छ । बन्द भएको एयरब्याग एक सेकेन्ड भन्दा पनि कम समयमा लगभग ३०० किलोमिटर प्रतिघन्टाको स्पिडमा फुल्छ ।
एयरब्यागको पनि एक्सपायरी डेट हुने गर्छ । समय सिमा नाघिसके पछि एयरब्यागले पनि रिप्लेसमेन्ट मागेको हुन्छ । तर, एयरब्यागको लागि प्रयोग गरिने फंक्सन निकै बलियो हुन्छ ।
कारमा रहेको सिट बेल्टको पनि एयरब्यागको फक्शनसँग लिंक रहेको हुन्छ । एयरब्याग बनाएको समयमा चालकले सिट बेल्ट पनि लगाउनेमा ध्यान दिएको हुन्छ । त्यसैले कहिल्यै पनि एयरब्यागमा मात्र भरोसा गर्नु हुँदैन । कुनै पनि दुर्घटनाको समयमा यदि एयरब्याग खुल्यो भने त्यसलाई ठिक गर्नको लागि अथोराइज्ड डिलरशिप वा वर्कशपमै गएर एयरब्याग ठिक गर्नु पर्छ । बच्चाहरुलाई कहिल्यै पनि एयरब्यागको अगाडि राख्नु हुँदैन ।
काठमाडौं - सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने भएको छ । यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरक...
हिरो मोटोकर्पको सबैभन्दा कम मूल्यको स्कुटर ‘प्लेजर’ अब नयाँ अवतारमा...
होन्डाले ल्याउदै छ यस्तो इलेक्ट्रिक कार
होन्डाले आगामी मार्चमा हुने जेनेभा मोटर शोमा नयाँ इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) को प्रो...